अर्थ/बाणिज्य – Nepal Online Khabar
Mar292021 by Nepal KhabarNo Comments
काठमान्डौ : के तपाई घर बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ ? कम भन्दा कम लागत र समयमा सुन्दर घर बनाउने कल्पना मध्यम बर्गिय नेपाली परिवारको रहेको छ । घर बनाउन लाग्ने खर्च, समय आदीले गर्दा धेरैले घर बनाउने योजनालाई सार्दै लैजाने गर्छन् । अहिलेको चलन चल्तीको ४ कोठा भएको एक तले घर बनाउन न्यूनतम पनि ३२ देखि ३५ लाख सम्म खर्च लाग्ने गर्छ । यो मूल्यमा घर बनाउन लामो समय लाग्ने हुनाले झन्झटिलो ठान्ने गरिन्छ । घर बनाउन देखिने यही झन्झटिलोलाई हटाउन पछिल्लो पटक कोरियन प्रविधि नेपाल भित्रिएको छ । आरसीसी प्रविधिको तुलनामा कोरियन प्रविधिबाट एक तले घर बनाउँदा ३० प्रतिशत सम्म सस्तो पर्छ ।’ घर बनाउने समयको कुरा गर्ने हो भने त झनै आरसीसी प्रविधिबाट बनाइएको घर भन्दा करिब ८० प्रतिशत छिटो तयार हुन्छ ।कोरियन प्रविधि अनुसार घर निर्माण गर्न अहिले एसवाई प्यानलले सक्रियता देखाएको छ । यो प्रविधि अनुसार ४ कोठा भएको घर, कङ्
Posted in अर्थ/बाणिज्य, ताजा समाचार
काठमाण्डौ : महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ यही साताको अन्त्यतिर बाँडफाँड हुने भएको छ । शुक्रबार वा शनिबारसम्ममा महिला लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड हुने सम्भावना रहेको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङले जनाएको हो । महिला लघुवित्तले गत माघ ३० गतेदेखि फागुन ५ गतेसम्म १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ४ करोड रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको थियो। कुल ४ लाख कित्तामध्ये ५ हजार कित्ता कर्मचारी र २० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको थियो । बाँकी ३ लाख ७५ हजार कित्तामा सर्वसाधारणले आवेदन दिएका छन् । यो आईपीओमा सर्वसाधारणबाट हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै आवेदन परेको छ । यसमा मागभन्दा ६० गुणा बढी आवेदन परेको सीडीएस एन्ड क्लियरिङले जनाएको छ ।
Posted in Hot News, अर्थ/बाणिज्य
काठमाडौ : यतिबेला नेपाली शेयर बजारमा निफ्रा अर्थात नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले सर्वाधिक चर्चा बटुलिरहेको छ । जसको मुख्य कारण हालसम्मै सबैभन्दा बढि साधारण शेयरको निष्काशनसँगै निष्काशित ८ करोड कित्ता साधारण शेयरको झण्डै १५ लाख लगानीकर्तालाई ५० र ६० कित्ताको दरले गरिएको बाँडफाँड पनि हो । नेप्सेमा संस्थापक १२ करोड र साधारण ८ करोड कित्ता शेयर गरी जम्मा २० करोड कित्ता शेयर सुचिकृत रहेको छ, जुन नेप्सेमा एउटै कम्पनीबाट हालसम्मकै सर्वाधिक कित्ता शेयरको सुचिकरण हो । बैंकले आईपीओ निष्काशन, वितरण र नेप्सेमा सुचिकरण पश्चात् यसको कारोबारका लागि आतुर लगानीकर्ताहरुलाई मध्यनजर गरि गत हप्ताको आइतबारबाट शेयर कारोबारमा ल्याएको थियो । कारोबार सुरु भएको पाँच मिनेट भित्र नै लगभग ५ लाखभन्दा बढि कित्ताको लागि माग भएको थियो भने आइतबार कारोबार बन्द हुने बेलासम्म लगभग ३० लाख कित्ताभन्दा बढीको लागि माग भएको थियो
कोरियाली कम्पनि एसवाई प्यानलले आफ्नो उत्पादन शुरु गरेको छ । फेब्रिकेटेड भवन निर्माण सम्बन्धि सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीले यसै हप्तादेखि उत्पादन शुरु गरेको हो । नेपालका बिभिन्न जिल्लामा कम्पनिबाट विभिन्न रंगहरुमा छाना तथा वाल प्यानलहरु उत्पादन शुरु गरेका छन् । बिभिन्न रंगको छाना र वाल २ देखि ६ इन्चीसम्म बाक्लो उत्पादन गरिने कम्पनीले जनाएको छ। शतप्रतिशत कोरियन प्रबिधि र लगानीमा स्थापना गरिएको सो कम्पनिको उत्पादनहरु भुकम्प प्रतिरोधी,सस्तो ,६० बर्ष टिकाउ हुने जनाइएको छ । ७२ करोड रुपैयाँ अधिकृत पुंजी रहेको सो कम्पनीले नेपालमा पहिलो पटक आधुनिक प्रबिधिद्वारा प्यानल उत्पादन शुरु गरिएको जनाइएको छ । कम्पनिद्वारा उत्पादन हुने छाना र वाल गर्मि क्षेत्रका लागि बरदान हुने जनाइएको छ । सो छानाले ८ देखि १० डीग्रीसम्म तापक्रम रोक्न सहयोग गर्छ। यो प्रविधिले चितवन लगायत तराइबासिलाई गर्मिबाट बच्न ठुलो
Oct122020 by Nepal KhabarNo Comments
काठमाडौ : सोच्नै नसकिने गरि घट्यो आलुको मुल्य ! आलुको ब्यबसायी खेती हुदा उत्पादनमा बृद्धि हुनु र नयाँ आलु बजारमा आएसँगै मुल्य घटेक हो । हुम्लामा आलुको मुल्य सस्तिएको छ । सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर १ अम्मरसिंह भण्डारीले हाल आलुको मुल्य प्रतिकेजी पैतीस रुपियाँमा बिक्री हुने गरेको बताए। ब्यबसायीक रुपमा आलु खेती गर्दै आउनु भएका भण्डारीले नयाँ आलु बजारमा नआउदासम्म प्रतिकेजी सत्तरी रुपियाँ पर्ने भएपनि नयाँ आएसंगै आधा मुल्य घटेको बताए । आलु खेती घरयासी प्रयोगका लागि गरिने भएको भएपनि पछिल्लो समय आम्दानी हुन थालेपछि आलुको ब्यबसायीक खेती सुरु भएको छ । हुम्लामा यो अबधि आलुको मुख्य सिजन सुरु भएको छ। ब्यबसायी आलु खेती गर्ने किसानको संख्या बृद्धि भएपछि प्रतिश्प्रर्धाका आधारमा आलुको मुल्य घटेको किसानले बताएका छन्। यसरी किसानबाट किन्दा आलुको मुल्य प्रतिकेजी पैतीस रुपियाँ परेपनि बजारमा भने चाली
मन्त्री नेम्वाङ भन्नुहुन्छ : बदमास ठेकेदारले बाटो बनाउँदैन, दोषचाहिँ प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा ?
पाँचथर : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले विभिन्न निकायबाट हुने कमजोरीमा समेत सरकारलाई दो'षी देखाउने कार्य भइरहेको बताउनुभएको छ । सरकार प्रत्यक्षरूपमा नजोडिएका क्षेत्रमा समेत सरकारलाई नै जिम्मेवार देखाई बद्नाम गर्न खोज्ने काम भइरहेको मन्त्री नेम्वाङको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरले शनिबार फिदिममा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “एउटा बद्मास ठेकेदारले बाटो बनाउँदैन तर दो'ष प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा लगाउने ?” कयौँ विकास आयोजनामा ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा सरकार आलो'चित हुनुपरेको भन्दै मन्त्री नेम्वाङले अब सरकारले कसैलाई पनि छुट दिन नसक्ने बताउनुभयो । “प्रधानमन्त्रीज्यूले शिलान्यास गर्नुभएको राँके–रवि–भेडेटार सडकको अहिलेसम्म ३२ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुनुपर्नेमा जम्मा सात प्रतिशत मात्रै छ”, नेम्वाङले भन्नुभयो, “ठेकेदारले काम नगर्दा रकम जुटाउने, शिलान
काडमाडाैं : लामो समयदेखि सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न नगर्ने विभिन्न २१ नि'र्माण व्यवसायी कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखी ठे'क्का प्रक्रिया र'द्द गर्न प्र'क्रिया अगाडि बढाइएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले मकवानपुर, वारा र पर्सा जिल्लामा सडक निर्माण र मर्मतलगायतका सम्झौता वमोजिम काम नगर्ने कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरी आवश्यक का'रवाही शुरुआत गरेको छ । कार्यालय प्रमुख योगेश सुमनले विसं २०६६ चैत अर्थात ११ वर्ष अगाडि सडक निर्माण तथा मर्मत ठेक्काको सम्झौता गरेका निर्माण व्यवसायीलाई पटक पटक सूचना गरेपनि सम्पर्कमा नआएकोले बाध्य भइ का'रवाहीमा जानु परेको जानकारी दिए। कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अन्तर्गत मकवानपुरका सात, पर्साका छ, बाराका तीन र काठमाडौँका एक निर्माण व्यवसायी कम्पनी छन् । ती कम्पनीसँग सम्झौता र'द्द आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ देखि २०७०÷०७१ सम्मको रहेका कार्यालयले जनाएको छ । सार्वजनिक
Sep202020 by Nepal KhabarNo Comments
काठमाडौं, ४ असोज । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले १८ लाख कित्ता शेयर लिलामीमा बिक्री गर्न गोप्य शिलबन्दी आव्हान गरेको छ । मेगा बैंकले संस्थापक समूहतर्फको ११ लाख ३३ हजार ३ सय ४४ दशमलव ७० कित्ता र सर्वसाधारण समूहतर्फको ७ लाख ७ हजार ३ सय ९४ दशमलव ९३ कित्ता गरी १८ लाख ४० हजार ७ सय ३९ दशमलव ६३ कित्ता शेयर गोप्य शिलबन्दी बोलपत्रबाट बिक्री गर्न लागेको हो । सर्वसाधारणहरुले असोज १८ गतेभित्र आफूले खरिद गर्न चाहेको प्रतिकित्ता शेयर र दररेट खुलाई गोप्य शिलबन्दीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसका लागि न्यूनतम १ सय रुपैया र त्यस भन्दा बढी कतिमा शेयर खरिद गर्न चाहेको हो स्पष्ट खुलाई बोलकबोल आवेदन दिनुपर्ने मेगा बैंकले जनाएको छ । उपत्यका भित्र मेगा बैंकको कमलादीस्थित मुख्य कार्यालय, नयाँ बानेश्वर चोक, ठमेल, न्यूरोड (पिपलबोट), ज्ञानेश्वर, चावहिल, बौद्ध, । कलंकी, गोंगबु, महाराजगञ्ज, मैतीदेवी, जावलाखेल